Infinity Symbol Ring 14K - Popular Jewelry
6Ndị ọzọ (Kpọtụrụ anyị ka anyị rịọ maka mgbanwe ahụ) size:
6 - $ 315.59Ndị ọzọ (Kpọtụrụ anyị ka anyị rịọ maka mgbanwe ahụ) - $ 315.59 Iche:
Gemstone: Gburugburu-Cut Diamond (0.07 ctw)
Ogo (okpueze akụkụ): 11.5mm (Elu) x 19.0mm (Ogologo)
Ihe nnọchi anya infinity diamond
Ndewo nu. Ọ dị m nwute na ngwụsị nyocha, nke a bụ onyinye afọ ncheta nke a ga-egosi ya na Afọ Ọhụrụ. Ahụrụ m mgbanaka n'anya wee jide n'aka na ọ ga-emekwa. A ga na-azụkwu ngwaahịa n'ọdịnihu. Ezumike ezumike ma na-ekele gị nke ukwuu.